I-120hz vs 60hz ifuthe kubomi bebhetri ngokuthelekiswa: i-galaxy s20 ultra vs s20 plus vs s20
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-120Hz vs 60Hz isiphumo kubomi bebhetri ngokuthelekiswa: I-Galaxy S20 Ultra vs S20 Plus vs S20
Iziphumo zerhafu yokuhlaziya eyi-120Hz kuthotho olutsha lweGPS S20 zinobomi bebhetri?
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, besivavanya i-Galaxy S20 Ultra, i-Galaxy S20 Plus kunye ne-Galaxy S20 encinci ukufumanisa ukuba yeyiphi impembelelo etshintshela kwinqanaba elitsha lokuhlaziya le-120Hz elinobomi bebhetri.
Iziphumo zovavanyo lwethu ngoku kwaye ngelishwa, azithethi kakuhle.
Ngelixa kwasekuqaleni, safumanisa ukuba ufumana phantse i-20% yobomi bebhetri obubi xa utshintsha ukhetho lwe-120Hz kwi-Galaxy S20 Ultra, uvavanyo olongezelelekileyo esele senzile emva kohlaziyo luka-Matshi kwangoko lubonisa ukuba isiphumo sinokubhengeza ngakumbi.
60Hz vs 120Hz Ubomi bebhetri
Kwinqanaba lokuhlaziya elingagqibekanga le-60Hz, ifayile yeGalaxy S20 Ultraithatha iiyure ezili-12 kunye nemizuzu engama-23 kuvavanyo lwethu lokukhangela kunye nokuskrola, ngaphezulu kweefowuni ezininzi esiye sazivavanya, kodwa ukuba utshintshela kwi-120Hz, iziphumo ziyehla ziye kwindawo ethile phakathi kweeyure ezili-10 kunye neeyure ezili-9 kunye nemizuzu eli-15, oko kuthetha ukuba kwindawo ethile phakathi kwe-20% kunye ne-25% yobomi bebhetri obubi.
Inkqubo ye-Galaxy S20 kunyeyenza ngokufanayo xa isetyenziswa kwi-60Hz: ihlala kancinci ngaphezulu kwe-Ultra kwiiyure ezili-12 kunye nemizuzu engama-40 kuvavanyo olufanayo, kodwa ukutshintshela kwi-120Hz kunefuthe elibi nangakumbi kubomi bebhetri. Kwimowudi ye-120Hz, amanqaku e-S20 Plus aya kwiiyure eziyi-8 kunye nemizuzu engama-30. Lo ngumahluko omangalisayo we-33%, ke ulahlekelwa sisithathu sebhetri yakho xa usebenzisa ukhetho lwe-120Hz kolu khangelo + lokukhangela.
Ibali elifanayo kunye nelincinciGalaxy S20. Ifumana amanqaku aphezulu kwi-60Hz xa ubomi bebhetri bufikelela kwiiyure ezili-12 kunye nemizuzu eli-12, kodwa tshintshela kwi-120Hz, kwaye uqaphele ukwehla okukhulu kubomi bebhetri ukuya kwiiyure ezisi-7 kunye nemizuzu engama-45! Yifowuni eye yabetha kakhulu ekusebenziseni i-120Hz njengoko ubomi bayo bebhetri buyehla nge-36%.
Ukukhangela + Ukuskrola
Galaxy S20 Ultra Iiyure ezili-12 iiyure ezingama-23 yahluka ukusuka kwiiyure ezili-10 ukuya kwiiyure ezili-9 kunye neeminti ezili-15 20% ukuya kuma-25%
Galaxy S20 kunye Iiyure ezili-12 iiyure ezingama-40 ngeenxa zonke iiyure eziyi-30 33%
Galaxy S20 Iiyure ezili-12 imizuzu eli-12 malunga neeyure ezisi-7 nemizuzu engama-45 36%
Oku kubi kuba kubonisa ukuba ukuphunyezwa kwe-120Hz kwiifowuni zamva nje ze-Samsung kushiya igumbi lokuphucula. Ukuphulukana nekota okanye nangaphezulu kobomi bebhetri kolu khetho luluncedo ngokuqinisekileyo lixabiso elinzima kakhulu ukulihlawula.
Ngaba uyazuza kwi-120Hz yeevidiyo kunye nomnye umxholo?
Masikucacise ukuba inqanaba lokuhlaziya eliyi-120Hz yinto oyiphawula ngokulula xa usebenzisa ifowuni kwaye uskrola ujikeleze, kodwa ayenzi mahluko ekubukeni kwevidiyo apho umxholo urekhodwa kwinqanaba lokuhlaziya elisezantsi kwaye awuzuzi kulo ukuvuselelwa kwesikrini okuphezulu. Sivavanye isiqingatha semidlalo eyaziwayo kwaye asifumananga mntu ohambelana nenketho ye-120Hz (kodwa sicinga ukuba eminye imidlalo iza kulungiswa kungekudala).
Athini amava akho ngokhetho olutsha lwe-120Hz kwiiGalaxies zamva nje? Ngaba ucwangcisa ukuyisebenzisa ngaphandle kweendleko zebhetri?
Thenga i-Galaxy S20 5G kwaye ufike kwi-700 yeedola ngokurhweba ngaphakathi
Isantya sever & v
I-Apple izisa indawo, iAudio engenaLahleko, ezinye izinto kubasebenzisi boMculo weApple kwi-Android
Ezona ndlebe zintambo zingenazingcingo zinokurhoxiswa kwengxolo esebenzayo
I-LG Velvet yiyo yonke into oyifunayo, akukho nto ungayenziyo
I-AT & T Modio inika unxibelelwano lwe-4G LTE kwi-Wi-Fi ethile yeemodeli ze-Apple iPad